Il volto di Padre Pio appare in Irpinia e si grida al miracolo. Foto | Ilblogdellapreghiera
Ihu Padre Pio pụtara na Irpinia wee tie mkpu maka ọrụ ebube ahụ. Foto
Ọdịdị ihu nke Saint of Pietrelcina mere na Mercogliano na mgbidi ụlọ na-ebighi ebi na nso ụlọ ụka San Modestino. N'otu ebe ahụ, ọtụtụ ndị lere anya na ndị isi ụlọ ọrụ Avellino na Captain Gabriele Papa kwọ ụgbọ oloko.
Ọtụtụ mmadụ n'ụtụtụ a n'etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị obi abụọ anwaala ịtụle arụmọrụ San Pio na mgbidi ụlọ ụka.
Aro ma ọ bụ ọrụ ebube? Nnyaahụ n’ime mgbede ụnyaahụ n’obodo niile anya dị n’elu mgbidi ụlọ ochie gbahapụrụ nso na ụka nke Mod Modino nwere ike ịmasị ihu Padre Pio nke Pietrelcina. Ọtụtụ narị ndị kwesịrị ntụkwasị obi kwagara na ịtụnanya n'ụtụtụ a jupụtara na mbara ihu n'ihu ụlọ ụka ochie nke Mercogliano. Dịka a pụrụ isi na-ahụ ya site na onyonyo, ọhụụ nke San Pio doro anya na ahịrị ya. O doro anya na ọ bụ nwanyị ochie ụnyaahụ mgbede ahụ onye hụrụ ihe nlere mbụ nke senti. Ka ọ dịgodị, enwere ndị na-eti mkpu ebube ahụ
Isi mmalite mercoglianonews.it
← Na post gara aga Gara aga post:Vicka nke Medjugorje kpughere atụmatụ nke Nwanyị anyị ma gwa anyị ihe niile ọ chọrọ
Ọzọ Post → Post ozo:Pope Francis: ihe nlere kwesiri ikwado nzuko anyi na Kraist